हल मा छत डिजाइन
मर्मत ठाउँ ठाउँ परिवर्तन गर्ने समय-उपभोग प्रक्रिया हो जुन जीवनका सबै क्वार्टरहरू प्रभावित गर्दछ। एक महत्वपूर्ण भाग छत छ, जुन बिना आंतरिक समाप्त हुनेछैन। आज हामी कुरा गर्नेछौं कि तपाईं हॉलमा छत कसरी सजाउन सक्नुहुन्छ।
छत को सजावट हाल नै को कोठा को सामान्य शैलीत्मक समाधान को लागि विशेष महत्व हासिल गरेको छ। सोभियत युगमा, जब त्यहाँ सबै तहखाने थियो, कसैले पनि हॉलमा बनाउन को छतको बारेमा सोचेनन्। सामान्यतया यो बस स्फूर्ति वा पेंट गरिएको थियो, केन्द्रमा एक परम्परागत झण्डा झुन्डिएको थियो। पुरानो घरहरूमा, स्टुको मोल्डिङ प्रयोगमा परिधि सहितको दुरुपयोग र ल्युमिनिरीलाई फाँसीको लागि एक राहत रस्सी सहित प्रयोग गरिएको थियो। आज, हॉलमा छतको डिजाइनमा हेराइहरू नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरियो। अब छत पूर्ण भित्री आन्तरिक वस्तु हो, जुन पर्खाल, फर्श र फर्नीचरसँग मिलेर मूल र स्टाइलिश हुनुपर्छ।
डेकरले व्यक्तिगत रूपमा हॉलमा छतको डिजाइनको माध्यमबाट सोच्ने सुझाव दिन्छ। मुख्य कुरा यो छ कि डिजाईन र हल्का परिदृश्य शैली शैलीको साथ कोठा को शैली संग मेल खाएको छ। आउनुहोस् आधुनिक शैलीको आधारभूत ढाँचाहरू छतमा राख्नुहोस्:
हॉलमा खैरो छिमेक , जुन, सम्भवतः, रूसी बजारमा सबै भन्दा बढी मागहरू छन्। उनीहरूको लोकप्रियता संरचनात्मक, रङ र पाठकीय समाधान र स्थापनाको गतिको विशाल विविधताको कारण हो। कपडा , चमकदार वा मैट छत राम्रो देखिन्छ। कैनवासहरू एक रङसँग वा कुनै पनि तस्बिरको साथ चयन गर्न सकिन्छ। ठूला इलाकाहरूका लागि, हॉलमा दुई- तीन वा तीन तह छत राम्रो छ। खिंचाव छतको मद्दतमा, अनौपचारिक वा अन्य उत्कृष्ट आकारका अनियमित डिजाइनहरू प्रायः बनाइन्छ, तिनीहरूलाई मौलिक रोशनीको पूरै पूरै पार्छ। लगभग हरेक स्ट्रेचर छतमा स्पॉटलाइट्स भएको छ, किनकि कोठा पनि कोने मा प्रकाश को भरी छ। छतको परिष्करणको लागि सामग्री निर्दोष र असामान्य सागरहरू दुवैको साथ प्रयोग गरिन्छ। तनावग्रस्त कपडाहरूको लाभ उनको नमीको प्रतिरोध, स्थायित्व, व्यावहारिकता र सुन्दर रूप हो। यदि पहिले नै तिनीहरूले मात्र निर्माण सामग्री बजारको छिटो विकासको कारण धनी मान्छे मात्र उपलब्ध थिए, त्यहाँ आर्थिक र बजेट विकल्पहरू धेरै छन्।
हॉलमा निलम्बित छतहरू प्लास्टरबोर्डका जटिल निर्माणहरू हुन्। यो सस्तो सामग्रीको साथ, तपाईं साधारण ज्यामितीय आकारहरूसँग सुरु गर्ने कुनै पनि आकारको छतमा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, र सबैभन्दा जटिल बहु-स्तरका तत्वहरू, घुमाईएका कदमहरू र सुचारु रेखाहरू समाप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता छतहरू असाध्यै सुन्दर र उत्तम देखिन्छ, अचम्मको कुरा विश्वसनीय। हिपमा जिypsum प्लास्टरबोर्ड छतहरू एक धातु आधारमा निश्चित सतह हुन्, जसको भित्र यो तारिख, वेंटिलेशन पाइपहरू र अन्य सञ्चार लुकाउन सम्भव छ। समाप्त गर्ने विशेष छत वालपेपर पेस्ट गर्नुहोस्, जुन दायाँ रंगमा चित्रित हुन्छ। जिप्सम गत्तामा यो कुनै पनि प्रकारको फिक्स्चर को लागि छेद बनाउन सम्भव छ, पहिले कामदारहरु संग कोठा को प्रकाश डिजाइन मा चर्चा गरेको छ। तपाईं बिखरे भएका र निर्देशित लाइट संयोजन गर्न सक्नुहुनेछ, चित्रहरु वा अन्य तत्वहरू पर्खालहरूमा छान्नुहोस्। निलम्बित छतहरू जटिल आकारहरू सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ।
हल को लागि डबल छत - निलंबित र छत को एक संयोजन को एक संयोजन। यदि तपाइँ यो समाप्ति लागु गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले प्लास्टरबोर्ड ढाँचालाई दुई-स्तरको छतमा फिक्स गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। प्रायः यी दीवारहरु संग आयताकार क्षेत्रहरु वा परिधि संग एक राहत रेखा हो।
बालकनी परिष्करणको भिन्नता
आउटलेट कसरी स्थापना गर्ने?
नर्सरीमा कैबिनेट - के तपाईको बच्चाको लागि इष्टतम फ्रान्जिङ हुनेछ?
एक काठ को फर्श को कवर गर्न को लागी?
काठ - प्राकृतिक सौन्दर्य र कस्म्यताबाट बनाएको घर देशको घरको डिजाइनमा
फिक्स्चर को प्रकार
स्नानघरमा कैबिनेट - कार्यात्मक फर्नीचरको छनौटमा व्यावहारिक सल्लाह
सानो भान्साको लागि भान्सा टेबल
कला नोवो शैलीमा फर्नीचर
कसरी भित्ताबाट रंग हटाउने?
पेरिसमा ब्रान्ड बाल्मैनको सङ्कलनको एक कार्यक्रम थियो, धेरै ताराधारी अतिथिहरू सङ्कलन गरे
आफ्नै हातले कुर्सी कुर्सी
Shebbie ठाठ शैली
सरदर सलाद को लागि ड्रेसिंग
बीफ लीवर, प्याज संग तली
कपाल कपाल बढ्नुहुन्छ?
खाना खानेको लागि उच्च कुर्सीको लागि आवरण गर्नुहोस्
बच्चाहरूको लागि काटन
महिलाको शीतकालीन जैकेट अलास्का
सिरियामा आक्रमणकारीहरू - हेरचाह र रखरखाव
खेल जैकेट - सबैभन्दा फैशनेबल र आरामदायक मोडेल र के गर्ने लुगा लगाउने?
म्याश - स्वादिष्ट, उपयोगी र मूल व्यंजनहरू पकाउने व्यञ्जनहरू
नेपफरीन्गाइटिस - लक्षण
बच्चाको मलहरूमा सेतो लुम्प्स
क्याल्कियम च्यानल अवरोधकहरू
रातो सुन्तला स्वास्थ्यको लागि राम्रो र खराब छन्
प्लम पाई-पिभोट - स्वादिष्ट पकाएको सामानको लागि सबैभन्दा मुख्य व्यञ्जनहरू
अडी एज्रा संग विवाह को दोस्रो सालगिरह को अवसर मा बार राफीली उनको विवाह भिडियो साझा गरे
हार्मोनल विफलताको लक्षण